Qaybaha soo-saarka Mini-LED-ka oo diyaar u ah rubuca saddexaad | Waxaan ka socdaa mac
Alaab-qeybiyeyaasha Apple Technologies Global Lighting Technologies waxay bilaabi doonaan shixnad ka kooban qaybaha muuqaalka yar ee LED-ga ah ee jiilka soo socda ee lagu daydo ee loo yaqaan 'MacBook Pro' rubuca saddexaad ee sannadka 2021. Markaa ugu yaraan waddamada ku xeel-dheer Internet-ka, DigiTimes, oo soo xigatay ilaha warshadaha. In kasta oo warbixinta oo dhammaystiran ay tahay in la sii daayo maanta, Macluumaadkani waa waxa ilaa hadda la helay.
Bilowgii sanadkan waxaa horeyba looga hadlay suurtagalnimada lahaanshaha bandhigyo mini-LED ah dhamaadka sanadka waanan sugnay Gen-Next MacBook Pro ee 2022. Shaashado cusub, dibedda cusub iyo naqshad gudaha ah. Qaarkood xitaa waxay ka hadlayaan suurtagalnimada in wax cusub lagu arko WWDC usbuuca soo socda. Layaab ma leh, laba sii dayn ayaa laga filayaa isla qaabkan. Mid ka mid ah 2021, oo leh naqshad cusub iyo 2022 oo leh mini-casriyaynta casriyaynta.
Iftiinka Caalamiga ah wuxuu bilaabi doonaa shixnadaha aaladaha cusub ee Apple rubuca sadexaad ee sanadka 2021. Saxiixa hagaha khafiifka ah alaab-qeybiyeyaasha Global Lighting Technologies (GLT) wuxuu bilaabi doonaa shixnadaha Apple jiilka soo socda ee loo yaqaan 'LED-backlit MacBook Pro mini series'. rubuca saddexaad ee 2021, sida laga soo xigtay ilaha warshadaha.
Iftiiminta yar-yar ee loo yaqaan 'LED-lightlight' waxay u oggolaaneysaa iftiin sare iyo isbarbar dhig wanaagsan oo ku saabsan moodooyinka cusub ee 'MacBook Pro'. Apple waxaa lagu xantaa inuu qorsheynayo moodooyinka cusub ee 'MacBook Pro'. 14-inch iyo 16-inch MacBook Pro. Mid kasta oo leh shaashad yar-yar oo LED ah iyo ku daris wanaagsan oo loo yaqaan 'M1 chip'. Buugagta xusuus-qorka ayaa la filayaa inay la yimaadaan naqshad sare iyo hoose oo fidsan iyo dekedo badan, oo ay ku jiraan soo-celinta HDMI dekedda, kaarka SD-ka, iyo xadhigga awoodda birlabta. Xanta ayaa sidoo kale soo jeedineysa in Touch Bar uu howlgab ka noqon doono furayaasha "Fn" jireed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Qaybaha soo-saarka Mini-LED-ka oo diyaar u ah rubuca saddexaad
Hawsha ECG ee Australia ugu dambeyn way shaqaysaa